दोस्रो छालमा हुत्तिइरहेको कोरोना भाइरस नेपालमा पनि निकै ‘आक्रमक’ मंगलबार बिहानै बिबिसीले एउटा समाचार लेख्यो-‘जहाँ हेरे पनि लाशैलाश अनि एम्बुलेन्सहरू मात्रै देखिन्छन्।’ कोरोना भाइरस संक्रमणले थलिदैँ गएको भारतको समाचार थियो यो। त्यसमा पनि समाचारभित्र उत्तर प्रदेशको दृश्यहरू उतारिएका थिए। कोराना संक्रमणबाट अहिले सबैभन्दा धेरै प्रभावित भारतको उत्तर प्रदेश हो। नेपालको धेरै भाग जोडिएको उत्तर प्रदेशको मुख्य केन्द्र लखनउ अहिले धेरै आक्रान्त छ। गजेन्द्र बाेहरा
ओलीले फ्यालेको ‘एमसिसी कार्ड’ र माओवादी केन्द्रलाई परेको सकस
तर, ओलीको बहिर्गमनका लागि जोडतोडले लागिरहेको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने साहस जुटाउन सकिरहेको छैन। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको दुई महिना पुग्न केही दिनमात्र बाँकी छँदा न तीन दलबीच गठबन्धन बन्न सकेको छ न माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनसकेको छ। धैर्यकान्त दत्त
कर्णालीबाट ‘क्रस’ भएको एमाले विभाजनको रेखा
नेकपा एमालेका ४ सांसदले ‘आत्मघाती कदम’ चाल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बनेको छ। सृजना घिमिरे
आफू बाँच्न मान्छेले ‘मारिरहेको’ प्रकृति
प्रकृति–अब मास्ने होइन, बचाउने हो। मान्छे बाँच्नका लागि प्रकृतीलाई पनि जोगाउन आवश्यक छ। अर्थात् ‘हामी सबै नबाँचे, पृथ्वीमा कोही पनि बाँच्दैन। केही पनि बच्दैन।’ गजेन्द्र बाेहरा
जसपा सहमति : आफ्नै नेतृत्वमा सरकार!
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउन दलहरू कसरत गरिरहेका बेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले आफ्नै नेतृत्वको सरकारका लागि पहल गर्ने सहमति गरेको छ। दुई दिनसम्म काठमाडौंमा चलेको जसपा पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूबीच आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउने विषयमा आन्तरिक सहमति भएको हो। धैर्यकान्त दत्त
गेरुवा वस्त्रमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको चित्र!
स्वामी ज्ञानमित्रले पूर्वराजासँग लगभग ३ घण्टा समय विताउँदा सोधेछन् कि, पहिले पनि गेरु वस्त्र धारण गरिबक्सेको थियो सरकार? पूर्वराजा शाहले केहीबेर नि:शब्द भएपछि भनेछन्, 'होइन यो वस्त्र मैले पहिलो पटक धारण गरेको हुँ।' वसन्तकुमार उपाध्याय
देउवाको ध्यान चुनावमा, पौडेलको सरकारमा
जसपा अध्यक्ष ठाकुर र भट्टराई–उपेन्द्र समूहबीच मचेको रडाकोका कारण देउवाको नेतृत्वमा तत्कालै सरकार बन्ने सम्भावना कमै देखिएको छ।उसोपनि संस्थापन इतरका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह ओलीको विकल्पमा सरकार बनाउन खोजिरहेपनि संसदभित्रको अंकगणित हेरेर देउवाले खासै रूची देखाएका छैनन्। धैर्यकान्त दत्त
बुढानीलकण्ठमा देखिएको महन्थको 'ओली क्रेज'
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबारका लागि तीन दलकाे बैठक डाकेका थिए। बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा बस्ने गरी डाकिएको बैठकका लागि माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) आफ्ना हाइप्रोफाइल नेतासँगै त्यहाँ पुगे। आयोमेल संवाददाता
‘राष्ट्रपति’ हुन नसकेकी राष्ट्रपति
विद्या भन्डारी सब भइन्, मदन भन्डारीकी ‘पत्नी’ भइन्। नेकपा एमालेका नेता भइन्। दलका नेता भइन्। पार्टीका कार्यकर्ता भइन्। प्रधानमन्त्रीकी ‘रबर स्ट्याम्प’ भइन्। उनका नेता, कार्यकर्ता जसले जे चाह्यो त्यो सब भइन्। तर, उनी कहिल्यै ‘राष्ट्रपति’ हुन सकिनन्। गजेन्द्र बाेहरा
ओलीविरुद्ध जाला त नेपाल–खनाल पक्ष?
नेपाल–खनालपक्षीय नेता रघुजी पन्त सरकार गठनमा पार्टीले गर्ने निर्णय नै मान्य हुने बताउँछन्। आफूहरूलाई माओवादी केन्द्रसँग जोडेर हेर्न नहुने र सरकार गठनमा पार्टीकै निर्णय मान्य हुने पन्तले बताए। ‘सरकार गठनमा एमालेले जे निर्णय गर्छ त्यही मान्छौं। हामीलाई माओवादी केन्द्रसँग जोडेर नहेर्नुस्,’ शनिबार नेपाल–खनाल पक्षीय स्थायी कमिटी बैठकपछि पन्तले भने। धैर्यकान्त दत्त
पठाओ हुइँक्याउने ‘असिम’ सपनाहरू
सार्वजनिक सवारीबाट वाक्क दिक्क अनि ट्याक्सीवालाको दादागिरीमा निरीह बनेकाहरू पठाओलाई आफ्नै साधन ठानिसकेका थिए। सरकारले पठाओलाई दिने हरेक ‘सास्ती’ सँग अब पठाओ चढ्नेहरू नै लड्न थाले। सरकारलाई गाली गर्न थाले। ट्याक्सीवालाहरूलाई सराप्न थाले। गजेन्द्र बाेहरा
ओलीको विकल्प ओली!
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि भंग भयो। ऋषि कट्टेलले नेकपा नामको सम्बन्धमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चबाट भएको त्यो फैसलाले नेकपाका दुई गठबन्धन एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएका छन्। धैर्यकान्त दत्त
माइतीघर मण्डलामा आजकल हरेक दिनजसो एउटा श्वेतधारी मानव उभिइरहेको हुन्छ। उसको छातीमा एउटा प्लेकार्ड हुन्छ। ‘मेरो कोभिड–१९ को भत्ता हराएको सूचना कृपया पाउने महानुभावले ९८४१६८००१९ मा सम्पर्क गरिदिनु होला। धन्यवाद!’ अनिता श्रेष्ठ
सरकारको नेतृत्व लिन किन हच्किरहेका छन् देउवा?
यस अन्तरालमा वैकल्पिक सरकारका लागि प्रयत्न त भइरहेका छन् तर स्पष्ट आकार लिन सकेको देखिँदैन। कांग्रेस, माओवादी र जसपा आ–आफ्नै रणनीतिक दाउमा देखिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अझै ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छ। तर, नयाँ सरकारबारे सभापति शेरबहादुर देउवा र इतरसमूह परस्परविरोधी धारमा पनि देखिन्छन्। धैर्यकान्त दत्त
आजभन्दा १३ वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा पाइला टेक्दै गर्दा सायदै विराज महर्जनले सोचेका थिए होलान् अन्त्य यति सुखद हुन्छ भनेर। सोमबार दशरथ रंगशालाको माहोल अर्कै थियो। कोरोना बिर्सिएर मैदान भरिने गरी दर्शकहरु उपस्थित भएर एउटै नारा लगाइरहेका थिए, ‘नेपाल...नेपाल...नेपाल...।’ त्यसैमा दर्शकको मुखबाट अर्को नाम पनि निस्किरहेको थियो ‘विराज...विराज...विराज...।’ गोविन्द जोशी
समर्थन फिर्ता लिन प्रचण्डलाई परेको सकस र ओलीको त्यो साहस
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएकै कारण ओलीले अहिले आफूलाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छन्। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनासाथ ओली नेतृत्वको सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्छ र सरकारले ३० दिनभित्र संसदमा बहुमत देखाउनुपर्ने हुन्छ। धैर्यकान्त दत्त
दुषित हावाको दुश्चक्र : चर्को मूल्य चुकाउनै बाँकी छ
‘यी सबै उम्किने प्रयासमात्रै हुन्। हाम्रा नीति निर्माताहरूले उम्किने प्रयासमात्रै गरे। कसरी यसको समाधानतिर जान सकिन्छ भन्ने प्रयासै गर्न चाहेनन्’ श्रेष्ठ भन्छन् ‘काठमाडौंको वायु प्रदुषण अब स्थायी भइसक्यो। विश्वकै सबैभन्दा प्रदुषित सहरको नाममा काठमाडौं दर्ज भइसक्यो।’ गजेन्द्र बाेहरा